Xubin ka tirsanaa Shabaab oo isku dhiibay ciidanka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Xubin ka tirsanaa Shabaab oo isku dhiibay ciidanka
Xubin ka tirsanaa Shabaab oo isku dhiibay ciidanka
written by warsan radio 05/01/2022
Abshir Cabdiraxman Cabdi oo ka tirsanaa Al-Shabab ayaa isku soo dhiibey Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed gaar ahaan Qeybta 60aad ee kusugan Deeganka Goofgaduud Buurey ee Gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed.
Abshir wuxuu Alshabab ku jirey Mudo Kudhow Labo Sano wuxuuna u qaabilsanaa dhanka Xisbiyada.
Waxaa uu sheegey in Sababta ku kaliftey in uu Alshabab ka soo baxo ay tahay Dhibaatada iyo go’odoonka ay Shacabka ku hayaan ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ka dib markii muuqaal ay ka duubeen ciidanka uu isku dhiibay.
Waxaa uu ugu baaqay dhalinyarada la mid ah ee ka tirsan Shabaab in ay isku soo dhiibaan ciidanka dowladda si dhaqan celin loogu sameeyo.
Xubin ka tirsanaa Shabaab oo isku dhiibay ciidanka was last modified: January 5th, 2022 by warsan radio
Aqriso:-Ergeyga Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika oo iscasilay
Dhageyso:-Wargelin muhiim ah
Midowga Musharaxiinta oo si kulul uga hadlay go’aankii Guddiga Doorashooyinka
Madaxweynaha Ruushka oo Soomaaliya u rajeeyay inay guul ka gaarto la-dagaalanka argagixisada
RW Rooble oo shacabka Soomaaliyeed u diray farriin ku aaddan Munaasabadda Ciidul Fidriga